အာဖဂန်နစ္စတန် | ခရီးသွားလမ်းညွှန် & ခရီးသွားအပန်းဖြေကမ္တာ့ဆောင်းပါးများ WebSite.WS | GVMG - ကမ္တာ့ Viral စျေးကွက်အုပ်စု
ခရီးသွားလမ်းညွှန် & ခရီးသွားအပန်းဖြေကမ္တာ့ဆောင်းပါးများ WebSite.WS > အာဖဂန်နစ္စတန်
အာဖဂန်နစ္စတန်မှာတစ်ဦးက breif ကြည့်ရှု
Afghanistan isacountry located in Central Asia. Afghanistan is often considered to be part of the Middle East due to its location on the Iranian plateau. In the west it is borders Iran, Pakistan in the south and east, တာ့ခ်မင်နစ္စတန်, Uzbekistan and Tajikistan in the north. Afghansapopulation is ranked 38th in the world, just shy of 30 သန်း. The capital city is Kabul with an estimated 1.5 လူဦးရေသန်း.
2018 9လ 2018 10လ 2018 11လ 2018 12လ 2019 1လ 2019 2လ 2019 3လ 2019 4လ 2019 5လ 2019 6လ 2019 7လ 2019 8လ 1234567 8910 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
ဒေသဆိုင်ရာအိန္ဒိယ Cookery – အဆိုပါပန်ဂျပ်
Times Square က New York City,
မုရတုသဲသောင်ပြင်, Paradise Found
Valenica နှင့် Catalonia ၏အဓိကအပန်းဖြေဖို့တစ်ဦးကခရီးစဉ်, စပိန်
ကမ္ဘာမြေမှ Hitchhiker ရဲ့လမ်းညွှန်
လျှော့စျေး Air လေကြောင်းလိုင်း (25)
ဇိမ်ခံ Resorts (23)
ခရီးသွား Packages (29)